पाँचथर कारुणिक नरसंहार, के आत्महत्या गर्ने ज्वाइँ नै थिए त हत्यारा ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
फिदिम । सोमबार राती पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ आरुबोटेमा कारुणिक नरसंहार भयो । विभत्स तरिकाले दुई परिवारको ९ जनाको सामूहिक हत्या गरियो । दुई परिवारको वंश नास गर्ने गरी एक युवकद्वारा भएको ९ जनाको सामूहिक हत्याले धेरैलाई स्तब्ध बनाइरहेको छ ।
खुकुरीले हानेर ९ जनाको हत्या भएको केही घन्टा नबित्दै संदिग्ध व्यक्ति पनि रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे । जसका कारण घटना झन् रहस्यमय बनेको छ ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले घटनाको कारण पारिवारिक कलह देखाएको छ । श्रीमती मनकुमारी शेर्मासँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुपरेको बदलामा पाँचथरको मिक्लाजुङ–७ लिम्बाका मानबहादुर माखिमले ससुराली र साढु दाइका दुई परिवारका सबै सदस्यको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
सम्बन्धविच्छेदले उब्जाएको द्वन्द्व:
वडाध्यक्ष हस्तराज फियाकका अनुसार उनीहरुबीच हालैमात्र सम्बन्धबिच्छेदको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । “मानबहादुरले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेको थिएनन् तर पनि उनी केही साताअघि सम्बन्धविच्छेदका लागि तयार भएका थिए”, वडाध्यक्ष फियाकले भन्नुभयो, “यो अकल्पनीय घटना सम्बन्धविच्छेद स्वीकारोक्तिको परिणाम हो । हाम्रो सिङ्गो गाउँ आँशुमा डुबेको छ ।”
वडाध्यक्ष फियाकका अनुसार मानबहादुर तीन वर्षदेखि माइतीमा रहेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न नमान्नुको कारण आश्चर्यजनक छ ।
“यता नआए पनि एकोहोरो भएका छन् भन्ने सुनेका थियौँ”, वडाध्यक्ष फियाकले भने, “पछिल्लो पटक उनी लुकिछिपी यहाँ हिँड्ने गरेको सुनिएको थियो ।”
क-कसको हत्या भयो ?
भागेर ज्यान जोगाउन सफल सीता खुजुमको अवस्था कस्तो छ ?
सीता बमबहादुर फियाकको नातिनी हुन् । सीता मामाघर आएकी थिइन् । आक्रमणबाट सीता पनि गम्भीर घाइते भएकी छिन् । उनको दायाँ हात भाँच्चिएको छ । उनको हाल दमकमा उपचार भइरहेको छ । उनी मानसिक रूपमा विक्षिप्त छिन् ।शरीरका अन्य कुनै पनि भागमा चोट नरहेको प्रहरीले जनाएको छ । चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीले उनलाई भेट्न कडाइ गरेका छन् । उनी आत्तिएको अवस्थामा रहे पनि शारीरिक रूपमा भने खतरामुक्त रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरीले हत्याबारे बिहान मात्र खबर पायो:
संदिग्ध व्यक्ति रुखमा झुण्डिएको भेटिए:
आत्महत्या गरेको नजिकै भेटियो खुकुरी:
अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार मानबहादुरले सोमबार राति झापामा रहेका केही आफन्तलाई फोन गरेको देखिएको छ । यो फोन सम्पर्क दुई परिवारका सदस्यहरुको विभत्स हत्यापछि नै भएको अनुमान गरिएको छ ।
उनले फोन सम्पर्क गरेकाहरुलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । प्रारम्भिक कुराकानीमा बताए अनुसार मानबहादुरले ५ हजार रुपैयाँ सापटी मागेका थिए । ‘पुरानो रोग बल्झियो भन्दै उनले पैसा मागेका रहेछन्’, अनुसन्धान अधिकारी भन्छन् ।
तर, घटनास्थलबाट करिब डेढ घन्टा हिँडेपछि नै उनले आत्महत्याको बाटो रोजे । रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा उनको शव भेटियो ।
एकान्तमा घर, कसैले जानकारी पाएन:
गत राति धनराजको घरमा जस्मिता शेर्मा(धनराजको श्रीमती) को उपचारका लागि धामी राखिएको थियो । धामीलाई धनराजले आफ्नै घरमा बस्ने जिद्दी गरे पनि धामीले मानेनन् । एकान्तमा रहेका दुवै घरमा एक–एक जनामात्रै पुरुष सदस्य थिए । धनराजको घरभन्दा माथि वडा कार्यालय तथा एउटा घर छ तर धनराजको कच्ची घर तल्लोपट्टि फर्किएका कारण घटना स्थानीयले राति जानकारीसमेत पाएनन् । बमबहादुरको घरको छेउमा दुई वटा घर रहे पनि एउटामा एक वृद्ध महिला र अर्कोमा एक युवतीमात्रै बस्दथे । प्रहरी अनुसन्धानले पनि एकान्तको मौकामा सबैमाथि खुकुरी प्रहार भएको देखाएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले उल्लेख गरे ।
नुनमा सिसाको टुक्रा हालेर मार्ने प्रयास:
अघिल्लो आइतबार धनराज शेर्माको भान्साघरको नुनमा सिसाका टुक्रा मिसिएको पाइएको थियो । यस क्रममा धनराजका दुई छोरीसहित केही स्थानीय महिला घाइते भएका थिए ।
लघु उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत धनराजको श्रीमती जस्मिता शेर्मा प्रशिक्षक थइन् । उनैले आफ्नो घरमा नास्ता बनाई प्रशिक्षार्थीलाई खुवाउथिइन् । शिक्षक लुइँटेलका अनुसार सिसाका टुक्रा भेटिएको कुरालाई धनराजले प्रहरीसम्म पुर्याएनन् । बिरामीहरु हालैमात्र फिदिमस्थित समर्पित अस्पतालमा उपचार गरी फर्किएका थिए । “सिसाका टुक्रा लगाएर धनराजको पूरै परिवार मार्ने योजना थियो कसैको”, स्थानीय हरेन्द्र फियाकले भने, “त्यो सम्भव नभएपछि सामूहिक हत्या भएको हुनसक्छ ।”
शव उठाई धरान पठाइयो:
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्तीका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी टोलीको अनुसन्धानपछि नौवटै शवको मुचुल्का उठाई परीक्षणका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको छ । “साँझ मुचुल्का बनाई सकिएको छ”, प्रजिअ वस्तीले भने, “भोलिबाट थप अनुसन्धान र शव परीक्षणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छु ।” घटनाको अनुसन्धानका लागि तालीमप्राप्त कुकुरसहित सङ्घीय प्रहरी एकाइ धरानबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शरद खत्री नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो ।